Itoophiyaatti daa'imman miliyoona 2 ta'an barnoota dhaabuuf - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright COLIN COSIER
Itoophiyaatti sababii walitti bu'insaafi beelaatiin haala walqabateen daa'imman miliyoona lamatti siqan barnoota isaanii adda kutuu dhaabbanni idil-addunyaa daa'immanii 'Save the Children' beeksise.
Itoophiyaatti bakka bu'aan dhaabbatichaa Ekiin Ogutogulaariin, haala amma jiruunis daa'imman kuma dhibba afuri ta'an baroota isaanii irraa akka buqaafaman BBC'tti himaniiru.
Ragaalaa ministira Barnotaa eeruun akka dubbatanittis, baatii Guraandhaa irra kaasee manneen barnootaa 623 kan cufaman yoo ta'u, kunis lakkoofsa manneen barnootaa ji'aan cufamanii 51 taasisa jedhaniiru.
Kana malees Itoophiyaa dabalatee sababii gogiinsaatiin Sudaan kibbaa, Somaaliyaa, fi Keeniyaatti torbaniin daa'imman kuma 90 ta'an balaa barnoota irraa buqa'uutiif kan saaxilaman ta'usaanii gabaasni dhaabbatichaan ni yaate ibsee jira.
Lakkoosfi kunis waggaatti gara miliyona 4.7tti akka siqu gabaasichi dabalee eeree jira.
Daa'imman yoo mana barnootaatiin ala ta'an ammoo, rakkoolee akka heeruma umurii malee, dadabarsuu seeraan alaafi balaawwan biraatiif saaxilamtoota ta'u kan jedhu gaabaasichi, ijoolleen naannoolee lolaatti argaman umurii waggaa saddeetii kaasee loltummaaf akka filataman eree jira.
Image copyright JOEL ROBINE
Daa'imman hunda caalaa balaa gogiinsaafi beelaaf kan saaxilaman ta'u kan dubbatan Okiin, ''haala danda'ameen manneen barnootaa akka hincufamneef hojatamu qabaata. Haalli akkasis dhaabbilee daa'imman gargaaru barbaadan bakka tokkootti akka ragataniifi balaa irra gahu malu irraa akka baraaramaniif ni gargaara'' jedhaniiru.
Dhaabbatichatti bakka bu'aan Afriikaa Bahaafi Kibbaa Deviid Raayit, rakkinnichi yaachisaa ta'u himu.
"Haala kanaan itti fufiinaan naannichiatti carraan dhaloota boruu balaa cimaa rratti kufa. Daa'imti kamiyyuu barnoota irraa buqaafamu hinqabaatan. Mirgi barachu isaanii eegamu qabaata. Kanaafuu wayita beelaafi rakko biraatti nammeen barnootaa saaqaa gochuun barbaachisaadha. Sababii nyaanni, bishaaniif talaalliin manneen barnootaatti dhiyeessuun danda'amuufu,'' jedhaniiru.
Karorri dhaabbata idil addunyaa kun bara kanaaf qabatees daa'imman osoo manneen barnootaatii hinbahiin haala maatiin itti bayyanachu danda'an irratti haala mijeessu ta'u ibsameera.
Waliigalattis naannawwa Afriikaa bahaafi kibbaatti ijoolleen gara miliyoona 21 ta'an hirina nyaataatiin rakkachaa jiraachu gabaasichi kaa'eera.
Beelli kutaan gammoojjii Itoophiyaa garmalee miidhe kunis seenaa keessatti kan sukkanneessa jedhamu ta'u dubbatu Ekiin. "Beelaa baayyee cimaafi kan bara 1960 irra kaaftee mudate hinbeekneedha,'' jedhu.
Beelli kunis kan itti fufe yoo ta'u, haalli bara kan jiruus gaarii akka hintaane dubbatu.